यस साता शेयर बजारमा एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार – Fewa Times
तिजको मुखैमा सुनको अभाब !-हेटौंडाको ओम्याक्स फिल्म हलमा आगलागी, आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेन-डिस्चार्ज भएपछि क्षमा माग्दै रोंए डा. केसी (पुरा पढ्नुहोस्)-भक्तपुरमा प्रहरी इन्काउन्टरमा दुई ‘अपहरणकारी’ ज्यान गयो-राप्रपाको एकीकरण प्रक्रिया अलमलमा-६.४ म्याग्निट्युडको भुकम्प : १० को मृत्यु , ४० घाइते-साथिको घरमा होमवर्क गर्न गएकी १३ वर्षीय बालिकाको बलात्कार गरि हत्या, अर्धनङ्ग अवस्थामा भेटियो लास (पुरा पढ्नुहोस्)-अपडेट : त्रिशुली नदीमा बस खस्दा ७ जनाको मृत्यु-काठमाडौंबाट पोखरा जाँदै गरेको बस त्रिशूलीमा खस्यो, ३३ जनाको उद्धार-वायुसेवा निगमले २३ अर्ब खर्चेर किनेको २ वाइडबडी विमानको वारेन्टी नभएको खुलासा !
यस साता शेयर बजारमा एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार
प्रकाशित मिति: February 17, 2018 5:58 pm
फागुन ५, काठमाडौँ – धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब ५४ करोड १४ लाख २५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार यस साता कूल १७९ कम्पनीको ३७ लाख ९२ हजार ४७० कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ०.६२ प्रतिशत कम हो । गत साता १७६ कम्पनीको रु एक अर्ब ५५ करोड ११ लाख दुई हजार बराबरको ४१ लाख ९६ हजार चार सय ९० कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएका थिए ।
साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ४०.२४ अंकले बढेर अन्तिम दिन एक हजार ४२४.९५ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ८.४९ अंकले बढेर ३०१.३० अंकमा आइपुगेको छ ।
यस साता कारोबार रकमका आधारमा प्रभु बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो बैंकको रु ६ करोड ७१ लाख ५० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
त्यसैगरी, कारोबार भएको शेयर संख्याका आधारमा पनि सोही बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । सो बैंकको दुई लाख ९३ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । कारोबार संख्याका आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो बैंकको ५९० वटा कित्ता शेयर कारोबार भएको स्टकले जनाएको छ ।
यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्ष नियमित कारोबारका लागि चार दिन खुला रह्यो । यस साता पनि ऋणपत्रतर्फ संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रको कुनै पनि कारोबार भएन ।
यस साता सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको ६ लाख कित्ता साधारण शेयर, जेविल्स फाइनान्सको २८ लाख ८९ हजार ५६२ कित्ता हकप्रद, ओरियन्ट होटलको १४ लाख २५ हजार १०६ कित्ता बोनस शेयर र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको १९ लाख ७३ हजार ९२८ कित्ता हकप्रद शेयर स्टकमा सूचीकृत भएको छ ।
तिजको मुखैमा सुनको अभाब !
हेटौंडाको ओम्याक्स फिल्म हलमा आगलागी, आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेन
डिस्चार्ज भएपछि क्षमा माग्दै रोंए डा. केसी (पुरा पढ्नुहोस्)
भक्तपुरमा प्रहरी इन्काउन्टरमा दुई ‘अपहरणकारी’ ज्यान गयो
बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै पेटीकोट लगाएर माइतीघरमा प्रदर्शन
भदौ, काठमाडौं । बलात्कारीलाई कडा सजायँको माग गर्दै शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा महिलाहरुले पेटीकोट लगाएर......
भदौ २, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सबै भन्दा बढी विकास प्रदेश......
सम्पादक : सालीकराम भट्ट